Weerar Lagu Dhaawacay Afhayeenka Madaxweynaha Xuub Sireed.
Weerarkii Afraad Oo Lala Beegsado Saldhiga Huriwaa Xili Habenimo ah .
Xaalada nabad gelyo ee magalada muqdisho ayaa dhowaanahanba ahayd mid kasii daraysa kadib markii dib loo dhigay shirka dib u heshiisiinta ee lagu waday inu dhaco bartmahii bisha aynu ku jirno.
Dilalka iyo qaraxyada lala beegsanayo ciidamada xukuumada Ethiopia ee ku sugan caasimada iyo weliba kuwa dowlada KMG ah ayaa noqday kuwo isdaba joog ah ,kadib markii ay ciidamada booliska e dowlada KMG ay hanan kari wayeen xaalad amaan ee caasimada muqdisho.
Sidoo kale waxaa ay ciidamada Ethiopia iyo kuwa dowlada KMG ahiba ay wadaan howl galo iyo baritaano lagu gelayo guryaha dadka rayidka ah taasoo sida ay shegayaan dad rayid ah oo diiday in magacyadooda la shaaciyo ay ku tilmaamen baritaankasi inuu qarkiis yahay kuwo ay mararka qaarkood ciidamada xukumada Ethiopia ay ku bililaqaystaan .
Baaritanki ugu dambeyey ee dhacay shalay galab ayaa lagu galay guri uu lahaa ganacsade eenow ,islamrkaana sida ay shegen ciidamada dowlada KMG ahi laga soo bixiyey hubka noocyadiisa kala duwan iyo tiro aad u badan oo rasaas ah .
Si kastaba ha ahaatee baaritaanadaan ayaa inta badan lagu soo qabtaa hub noocyadiisa kala duwan ,waloow ay jiraan sida ay sheeganayaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan caasimada in baaritanadaasi qaarkood lagu qaato hantida dadka shacabka ah,balse ay cidamada booliska dowladauna ay ku xaqiijinayaan amaanka caasimada oo noqday mid aan laysku halayn karin.
Weerar Lagu Dhaawacay Afhayeenka Madaxweynaha Xuub Sireed.......
AFhayeenka Madaxweynaha dowlada FKMG ah ayaa xalay maqribnamadii lagu dhaawacay isgoyska howl-wadaag ee magalada muqdisho .
Xuseen maxamed maxamud (xuub sireed) oo ah afhayeenka madaxweynaha dowlada KMG ah oo watey gaari nooca loo yaqaano market-2 ayaa nin ku hubaysan bastoolad la beegsaday ,xili uu kusoo dukaamaystay suuqa weyn e bakaaraha.
Afhayeenka ayaa waxaa soo gaaray dhaawac fudud sida uu saxaafada u xaqiijiyey agaasime waxeedka madaxtooyada c/weli jaamac ,islamrkaana sheegay inay xabadu kaga dhacday garabka midig ,kadibna lagu daaweynayo isbitaalka ciidamada Amisom ee ku yaala gudaha garoonka caalamiga ah ee aadan cadde .
Sidoo kale wararka laga helayo xarunta madaxtooyada ee magalada muqdisho ayaa tibaaxaya inuu afhayeenka madaxweynaha xuseen xuub sireed uu ahaa raga ugu cad cad afhayeenada madaxtooyada .
Ninka weerarka gaystay ayaa baxsaday islamrkaana aan la ogayn meesha uu ku sugan yahay ,balse sida ay sheegen sarakiisha booliska inay jiraan baaritaano lagu raadinayo qofkii gaystay falkaas
Maaha markii ugu horaysay ee lala beegsado weeraro noocan oo kale masuuliyiinta dowlada KMG ah iyo weliba ciidamada xabashida ee ay garabsanayaan .
Waxaa xalay saqdii dhexe kooxo dabley ah oo hubeysan ay weerar la beegsadeen saldhigga ciidanka booliska ee degmada Huriwaa, iyadoo ay halkaas ka jirtay bandow lagu soo rogay xiliga habeenkii ah .
Rasaas aad u xoogan ayaa hal mar isku dhacday oo argagax ku abuurtay dadka deganka degmada huriwaa gaar ahaan agagaarka Saldhigga Booliska degmada Huriwaa taasoo socotey ku dhowaad 45-daqiiqadood
Sida uu saxaafada u xaqiijiyey dad goob joogeyaal ahaa oo degan agagaarka saldhiga booliska huriwaa ayaa sheegay inay maqalyeen rasaas aad u xoogan oo lays waydaarsanayo oo u dhaxayso dablay aan haybtoda la garanayn iyo ciidamada booliska ku sugnaa xiligaa saldhigaas ,iyadoo la sheegay in hal askari oo booli ah uu ku geeriyooday islamarkana labo kamida dableyda weerarka gaysatay uusoo gaaray dhaawacyo kala duwan.
Dadka deegaanka ayaa saaka ku waaberiistay dhiig iyo xinjiro daadsan wadooyinka soo gala saldhiga ,taasoo ay ku shegeen ciidamada booliska ku sugnaa saaka saldhigas oo saxaafadu wax ka waydiisay dhiigan inay yihiin dabaleydii weerarka kusoo qaaday ,waloow aan la xaqiijin karin arintaas iyo weliba cidda ka dambaysay weerarkaas.
Weerarkan ayaa kusoo beegmaya xili ay ciidamada Ethiopia iyo kuwa dowlada KMG ahi howl galo ka wadaan caasimada muqdisho ,iyagoo xusul duub ugu jira xaqiijinta amaanka, balse ku gulaysan la, ilaa hada inay hantaan amaanka caasimada muqdisho oo marba marka kasii dambaysa kasii daraya .